महिला भन्दा पुरुषहरु कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा, यस्तो छ वैज्ञानिक कारण ?
बिहिबार १ जेठ, २०७७
काठमाडौँ । मुलुकभर महिलाको तुलनामा पुरुषहरु कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । हालसम्मको संक्रमितको संख्या हेर्दा पनि पुरुषको संख्या महिलाको तुलनामा उच्च छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार संक्रमितमध्ये ८१ प्रतिशत पुरुष छन् । बिहीबार बिहानसम्म पुष्टि भएका २ सय ५० संक्रमितमध्ये २ सय १ जना पुरुष र ४९ जना महिला छन् ।
हालसम्म संक्रमित पुरुषको न्यूनतम उमेर ३ वर्ष र अधिकतम ७२ वर्ष छ । संक्रमित महिलाको न्यूनतम उमेर २ महिना र अधिकतम ८१ वर्ष छ । पुरुष र महिला दुवै गरी सबैभन्दा बढी संक्रमित १५ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका रहेको डा. अधिकारीले बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डा. वासुदेव पाण्डे हालसम्मको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा देशभर महिलाको दाँजोमा पुरुषमा कोरोनाको जोखिम बढी रहेको दाबी गर्छन् ।
पुरुषमा संक्रमण बढी देखिनुमा वैदेशिक रोजगारीका लागि भारतलगायत अन्य मुलुकमा महिलाको दाँजोमा पुरुषहरु बढी जानु प्रमुख कारण रहेको डा. पाण्डे बताउँछन् । उनका अनुसार नेपाल मात्र नभई विदेशमा समेत महिलाको दाँजोमा पुरुषमा संक्रमण दर बढी छ । कोभिड–१९ संक्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेहरुमा समेत पुरुषको संख्या अधिक छ ।
विभिन्न अध्ययनहरुले महिलाको तुलनामा पुरुषमा संक्रमण तीव्र गतिले फैलिने समेत देखाएका छन् । पुरुषमा कोरोना संक्रमण र यसले उत्पन्न गर्ने जटिलता बढी देखिनुमा बानीव्यहोरा प्रमुख कारण रहेको विज्ञहरुले औंल्याएका छन् । हाल नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा सेवन गर्ने पुरुषको संख्या महिलाको तुलनामा चार गुणाले बढी छ । जनस्वास्थ्यविद् डा. राजेन्द्र बीसी पुरुषलाई कोभिड–१९ को संक्रमण बढी हुनुमा धूमपान, मद्यपान, तमाखु सेवन र स्वतन्त्र जीवनशैली प्रमुख कारण रहेको मान्छन् । यस अलावा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुने, ‘एसीई–२’ नामक प्रोटिनको मात्रासमेत बढी हुँदा पुरुषमा सजिलै संक्रमण फैलनमा मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ ।
मानव शरीरको प्रत्येक कोषमा २३ जोडी क्रोमोजोम हुन्छ । पुरुष र महिलामा हुने २२ जोडी क्रोमोजोम एउटै हुने भए पनि बाँकी एक जोडी भने फरक–फरक हुन्छ । पुरुषको तुलनामा महिला आन्तरिक रूपमा बलियो हुने अध्ययनले देखाएको छ । ‘एक्स’ क्रोमोजोममा शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित धेरैजसो जिन समाहित हुन्छ । यसैले एउटाको सट्टा दुईवटा ‘एक्स’ क्रोमोजोम भएको व्यक्तिमा प्रतिरोध क्षमता अधिक हुन्छ । ‘महिलामा एक्स, एक्स र पुरुषमा एक्स, वाई क्रोमोजोम हुन्छन् । एक्स क्रोमोजोम रोग प्रतिरोधक क्षमतासँग सम्बन्धित रहेको पूर्ण प्रमाणित तथ्य हो,’ डा. बीसी भन्छन्, ‘एक्स क्रोमोजोम महिलामा दुईवटा हुनुले समेत उनीहरुलाई संक्रमण कम भएको हुन सक्छ ।’
डा. पाण्डेका अनुसार पुरुषमा भाइरसलाई आकर्षित गर्ने ‘एसीई–२’ नामक प्रोटिनको मात्रा धेरै हुन्छ । यसले पनि संक्रमण बढी भएको हुन सक्ने तथ्य वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाएको उनको भनाइ छ । ‘पुरुषको फोक्सो, आन्द्रा, मुटु, अण्डकोषमा पाइने यो प्रोटिनको मात्रा अण्डकोषमा ज्यादा हुन्छ । जब कि यो तत्त्व महिलाको गर्भाशयमा धेरै कम मात्रामा पाइन्छ,’ डा. पाण्डेले भने, ‘कोरोना संक्रमण भएपछि उक्त प्रोटिनले भाइरसलाई आकर्षित गर्छ । भाइरस त्यही कोषिकामा टाँसिन्छ, जसले प्रोटिन छोड्छ ।’ सन् २००३ मा सार्स रोग फैलिँदासमेत यसैकारण पुरुषको बढी मृत्यु भएको उनी बताउँछन् ।
सामान्यत: महिलाहरु पुरुषको दाँजोमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरामा बढी सचेत हुने गरेको औंल्याउँदै डा. बीसी भन्छन्, ‘घरभित्र बस्दा वा बाहिर निस्केपछि महिलाहरु सुरक्षाका उपाय अपनाउन सचेत देखिन्छन्, यसले पनि संक्रमण फैलने दरमा फरक पार्छ ।’ पुरुषहरुले स्वभावत: जे त होला भन्दै स्वास्थ्य सतर्कतामा ध्यान नदिने गरेको समेत उनको भनाइ छ । विज्ञहरुले कोभिड–१९ संक्रमणबाट सुरक्षित रहन स्वस्थकर जीवनशैली, खानपानका साथै मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन नगर्न आग्रह गरेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।